RASMI: Kooxda Barcelona oo shaacisay liiska xiddigaheeda qeybta ka ah safarka ay ku tagayaan dalka Japan – Gool FM
Wax walba aad uga baahan tahay inaad ka ogaato Isku Aadka wareega siddeeda ee Champions League oo Maanta la sameyn doono
Man United oo rikoodh cajiib ah ka sameysay Premier League kaddib guushii ay xalay ka gaartay kooxda Aston Villa
RASMI: Kooxda Barcelona oo shaacisay liiska xiddigaheeda qeybta ka ah safarka ay ku tagayaan dalka Japan
(Spain) 20 Luulyo 2019. Barcelona ayaa ku shaacisay website-keeda rasmiga ah liiska kama dambeysta ah xiddigaha kooxdeeda ee qeybta ka ah safarka ay ku tagayaan dalka Japan, si ay ugu diyaar garoobaan xilli ciyaareedka cusub ee 2019-2020.
Waxaa liiskan loogu yeeray oo qeyb ka ah 17 ciyaartoy oo ka tirsan kooxda koowaad iyo 8 ciyaartoy oo ka yimid kooxda da’ayrta ah ee heerka labaad.
Tababaraha reer Spain ee Ernesto Valverde ayaa ku dhawaaqay liis ka kooban 26 ciyaartoy oo ka qeybgalaya tartanka Rakuten Cup 2019, kaasoo maalmo kadib la qorsheenayo in lagu qabto dalka Japan.
Barcelona ayaa ciyaari doonta 2 kulan ay ugu diyaar garoobeyso xilli ciyaareedka soo socda, kulanka ugu horeeya ayaa waxay kula ciyaari doontaa Talaadada kooxda Chelsea magaalada Tokyo, halka kulnka kale ay Sabtida soo aadan kula ciyaari doonto kooxda Vissel Kobe magaalada Kobe.
Hadaba halka hoose kaga boggo liiska ciyaartoyda kooxda Barcelona ee qeybta ka ah safarka ay ku tagayaan dalka Japan:
Keebaa wanaagsan xiddigaha Neymar Jr iyo Eden Hazard? waxaa ka jawaabaya Marcelo